IXESHA ooVimba-Funda ukurhweba
IXESHA leMagazini libhengeza i-Cryptocurrency yeNtlawulo yokuKhetha abaThengi bayo
Ukuhlaziywa: 19 April 2021
IXESHA leMagazini lilandele isigqibo sayo sokungena kwimakethi ye-Bitcoin kunye ne-cryptocurrency, njengoko inkampani ngoku yamkela iintlawulo ze-crypto ngobhaliso lwayo lwedijithali. Isibhengezo siza kwiiveki ezimbalwa emva kokuba umenzi wemagazini omkhulu esebenzisana neGrayscale ukuvelisa izixhobo zemfundo ze-cryptocurrency.
Ngomcimbi wayo wokuqala wokuthandana kwiminyaka elikhulu eyadlulayo, IXESHA leMagazini lelinye lawona magazini makhulu kunye neendaba ezindala kunye neewebhusayithi eMelika. Kwangoko namhlanje, indlu yemithombo yeendaba ese-New York ibhengeze obunye ubuhlakani obunxulumene ne-cryptocurrency.
Ngokusebenzisana kwayo ne-CryptoCom-utshintshiselwano oludumileyo lwe-imali-IXESHA lenze ukuba kuhlawulwe imali ye-imali yedatha ngokurhuma kwayo kwidijithali.
Ngenjongo yokuqinisa ukwamkelwa kwenkqubo entsha yokuhlawula, inkampani iqaphele ukuba abafundi ababhalisela ukusebenzisa olu khetho baya kuthi "Fumana ukufikelela okungenamda kumxholo kwiTime.com kangangeenyanga ezili-18 ngokuthenga kwabo ngexesha elinye, kunye neziganeko ezibhalisiweyo kuphela kunye neminikelo."
Okwangoku, kuphela ababhalisile baseMelika naseCanada abaya kuba nakho ukusebenzisa ukhetho lokuhlawula i-crypto. Nangona kunjalo, zombini ezi nkampani ziceba ukwandisa ukhetho lwazo lokuhlawula kwihlabathi liphela ngokuphela konyaka.
Njengenkuthazo, abasebenzisi ababhalisela iinkonzo zeXESHA besebenzisa i-CRO, imali yemveli ye-CryptoCom, baya kufumana iMivuzo yokuHlawula ephezulu njenge-10% umva.
Isithethi esivela kwiCryptoCom siphawule kudliwanondlebe ukuba yinkampani "Ndihlala ndikhangela ubuhlakani obutsha nobutsha obuqhubela phambili nomsebenzi wethu wokukhawulezisa utshintsho kwihlabathi liphela kwi-cryptocurrency."
IXESHA lokuGcina i-Bitcoin kwiPhepha layo leBhalansi
Ngaphambi kokubambisana kwayo neCryptoCom, IXESHA libambisene neGreycale-oyena mphathi mkhulu we-asethi yedijithali-ukwenza umxholo wemfundo yemali engezantsi (iividiyo).
Into enomdla kukuba, emva kokwenza isibhengezo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uMichael Sonnenshein, umphathi weGrayscale, utyhile ukuba IXESHA kunye nomphathi wayo, uKeith Grossman, bavumile ukuba bahlawulwe kwiBitcoin ngalo mbandela.
Okwangoku, IXESHA likwabonakalisile ukuba liza kuyigcina i-BTC efunyenweyo kubathengi kwiphepha layo, ngaloo ndlela ijoyine iMicroStrource, iTesla, kunye nabanye abaninzi.
tags ICRYPTOCOM, Cryptocurrency, iindaba, IXESHA